स्वास्थ्य Archives - Page9of9- JamarkoOnline
अजिनोमोटो अर्थात् खानेकुरालाई स्वादिलो बनाइदिने, झट्ट हेर्दा चिनी जस्तै देखिने सेतो धूलो पदार्थ । बजारमा यसलाई सामान्यतः अजिनोमोटो भनेर चिनिने गरिन्छ । त्यसबाहेक यसलाई टेस्टिङ पाउडर भनेर पनि बोलाइने गरिन्छ । त्यसबाहेक, कतिपयले यसलाई मोनोसोडियम र छोटकरीमा एमएसजी भनेर पनि चिन्ने गर्छन् । खासगरी, चाइनिज वा जापानिज खानेकुराहरुमा एक किसिमले
पथरीशनिश्चरे, २४ पुस मोरङको पथरीशनिश्चरेमा सहारा नेपाल सहकारी सेवा केन्द्र पथरीले आज आयोजना गरेको निशुल्क शिविरमा २५ जनामा मोतियाविन्दु फेला परेको छ । मोतियाविन्दु भएका सवैलाई निशुल्क शल्यक्रियाका लागि आजै मेची आँखा अस्पताल विर्तामोड लगिएको कार्यक्रम संयोजक डम्वर प्रधानले जनाउनु भयो । मेची आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा सहारा नेपाल
मासिक श्रावको अवस्थामा बाहिर हिँडडुल गर्न गाह्रै हुन्छ?
मासिक श्रावको अवस्थामा बाहिर हिँडडुल गर्न गाह्रै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सकेसम्म घरबाहिर निस्कन नपरोस् भन्ने लाग्छ । किनभने, लामो समय घरबहिर बस्दा वा हिँडडुल गर्दा प्याड परिवर्तन गर्न संभव हुँदैन । तयसैले दिनचर्या असजिलो बनाइदिन्छ । काममा ध्यान केन्द्रित गराउन सकिादैन । लामो समयसम्म प्याड प्रयोग गर्नु असजिलो मात्र
बिना अप्रेशन पायल्स रोगबाट छुटकारा पाउन अपनाउनुहोस् यि घरेलु उपाय:
काठमाडौँ । अचेल धेरै जसो मानिसहरु पाइल्स समस्याको शिकार भएको पाइन्छ । मानिसको दिशा गर्ने ठाउँवरिपरि रहेका रक्तनशाहरु विविध कारणबाट सुन्निएको या मांसपेशीका अङ्कुरहरुको आकार बढ्न गएमा यस स्थितिलाई पाइल्स भनिन्छ । यो अवस्था बढ्दै जाँदा मांशपेशीको आकार चनाको दाना जत्रो सम्म हुन पुग्छ र दिशा गर्दा पीडा हुन थाल्छ
नेपाली समाजमा एउटा रमाइलो प्रसंग छ । जब कोही फलफूल बोकेर हिँडिरहेका हुन्छन् । छिमेकीले सोध्छन्, ‘होइन, कोहि बिरामी छ ?’ छिमेकीले किनपनि यस्तो आशंका गरे भने तपाईंले फलफूल बोक्नुभएको छ । अर्थात हामी घरमा कोही बिरामी परे फलफूल ख्वाउँछौ । कोही आफन्त, साथीभाई, छिमेकी अस्पतालमा भर्ना भए भने उनलाई
योगाले कम हुन्छ क्यान्सरको जोखिम,योगा र ध्यान गर्नुका ५ फाइदा
आजभोली शहरी इलाकामा बस्ने धेरै मानिसहरु मोटोपनाको शिकार भएको पाइन्छ । मोटोपनाको कारण भद्दा भएको शरीरलाई फिट बनाउनको लागि धेरैले विभिन्न उपायहरु अपनाउँछन् । ती मध्ये सबैभन्दा सरल र प्रभावकारी उपाय हो नियमित योगा र ध्यान गर्ने । नियमित योगा र ध्यान गर्नाले धेरै हाम्रो शरीर चुस्त दुरुस्त त हुन्छ
मिर्गौलामा उत्पन्न हुने विविध समस्यामध्ये पत्थरी पनि एउटा हो । अव्यवस्थित जीवनशैली र खानपानका कारण मिर्गौलामा पत्थरी हुने गर्छ । त्यसैले सही खानपानले पनि यस्तो पत्थरीबाट बच्न सकिन्छ । तर, पत्थरी बढ्दै गइसकेको अवस्थामा भने औषधी वा शल्यक्रिया गर्नुको विकल्प हुादैन । के खाने ? पानी पत्थरी भएका व्यक्तिले साविकको